Types of braking na Electric Skateboards - Jomo Technology Co., Ltd
Na nke ọ bụla electric ụgbọala, e nwere ọtụtụ isi di iche iche nke braking- ike, esemokwu, na regenerative braking. Ha niile na-eji ụzọ dị iche iche nke ibelata ụgbọala ala.
Esemokwu brek bụ otu ụdị brek na-eji na ot ụgbọala. Nnoo, esemokwu megide a breeki diski na-eji iji tọghata kinetic ume (ije nke ụgbọala) n'ime okpomọkụ, nke slows ụgbọala ala. A mgbe ụzọ bike-eji esemokwu ịkụda site clamping a breeki na mpe mpe akwa megide n'ime rim nke bike nke wheel.
Electric skateboards n'ozuzu adịghị eji esemokwu brek n'ihi na ọ na-achọ keukwu n'ibu ngwaike na wears si.
Outrunner brushless motors- ndị kasị ụdị nke moto ji na electric skateboards-nnoo a set nke na-adịgide adịgide nju gburugburu a isi nke ọla kọpa waya ọnya na okirikiri nke mere na mgbe eletrik na-chụpụrụ site na waya, ọ na-emepụta a ndọta na agabiga na na set nke na-adịgide adịgide nju, na-eme moto bugharia. The coiled wires na-electromagnet. The jụụ ihe banyere nju bụ na-abụghị mmetụta nwere ike occur- ma ọ bụrụ na ị na-bugharia magnetik mgbanaka gburugburu ọla kọpa waya, ọ na-ewebata eletrik na wires. Nke a bụ isi isi n'azụ ma ike na regenerative breeki usoro, na otú generators n'ịwa ọkụ eletrik.
Dynamic braking bụ a usoro na-eji ụgbọ okporo ígwè locomotives. Na nke a usoro, kinetic ike converted n'ime okpomọkụ site na-ebufe ọkụ eletrik N'ịbụ spinning Motors n'ime a resistor, nke ahụ dissipates ume dị ka okpomọkụ. Mgbe nju na moto eji a ugbu a na ọla kọpa wires, na-eguzogide na-eme, slowing na moto spinning.
Dị ka nke taa, e nwere otu electric skateboard nke na-eji ike braking na njikọ na regenerative braking.
Electric skateboards isi jiri a usoro a na-akpọ "regenerative braking". Nke a bụ yiri ike braking, ma e wezụga kama redirecting na ọkụ eletrik n'ime a resistor ka dissipate ume dị ka okpomọkụ, ọ na-ibugharị azụ n'ime batrị, recharging ya.
The isi nke na regenerative usoro bụ na mgbe a na batrị full, ọ na-apụghị anabata ihe ọ bụla ọzọ ugbu a na-enweghị overloading na-ebibi batrị. N'ihi nke a, mbadamba na-eji naanị regenerative braking ga-atụfu niile ike breeki mgbe batrị akụrisị 100% ego.
Boards ka Koowheel Board ma ọ bụ sikwuo Board ga mkpọtụ dị n'ihu brek bee, ma nke a bụ mgbe bụghị iji mee ka na-enweghị uche agba na eri anya na osisi. Nke a bụ ya mere na ọ dị mkpa ka mgbe niile mara otú ụkwụ breeki na bụla ọsọ ị nọkwasị gị electric skateboard na. The nnukwu uru na Mellow mbanye bụ na ọ na-eji ma regenerative na ike braking- ozugbo batrị jupụtara (na mgbe ọzọ osisi si brek ga gbupụrụ kpamkpam), ọ tụụrụ ka ike braking na ka-enye gị ohere jiri nwayọọ.
Post oge: Dec-14-2017